सेक्सी आन्टीको बास पेन्टी // 18+ // Nepali Sex Story - Nepali Sex Tube
सेक्सी आन्टीको बास पेन्टी // 18+ // Nepali Sex Story
उनको विवाह गर्दा म १२ वर्षको थिए। आज भन्दा करिब ९ वर्ष अघि। विवाहमा दुलही भित्र्याउँदा उनलाई पहिलो पटक देखेको, अनि त्यो कलिलो मस्तिष्कमा छाप बसेको थियो, राम्री कटी भनेको यस्तो हुन्छन् भन्ने।
अहिले म लक्का जवान भइसके अनि उनी एउटा छोरोको आमा। तापनि पहिलो पटक भेट्ने मान्छेले उनलाइ अविवाहित नै सोच्छन्। उनको जिउडाल नै त्यस्तै। २५-२६ वर्षकी जस्तो देखिने। उमेर त्यस्तै ३३-३४ भयो होला। तर उनको हरेक अंग अंगमा जवानीको राप हुन्छ।
उनी धनी परिवारकी केटी। विवाह पनि धनी परिवारमै भयो। खै यो धनीहरु कस्तो पर्फ्युम लगाउँछन् साला मन नै मन्द बनाउने। उनको त्यही बासनाको लागि मात्र पनि म बेला बखत उनलाई भेट्न जान्थे। अङ्कल अफिस गएको बेला, भाइ स्कुल गएको समयमा।
उनी घरमा बस्दा कुर्ता सुरुवालमा ज्यादा भेटिन्थिन। उनका पुष्टिएका स्तन कुर्ता बाहिरैबाट छताछुल्ल भइदिन्थ्यो। कुनै तरुणीले टाइट लुगा लगाउँदा जसरी स्तन माथी उठेर आउँछ, हो त्यस्तै। मलाई त्यति हेर्ने मन हुन्थ्यो। हप्तामा २-३ पटक त म पुगेकै हुन्थे। गफ गरिन्थ्यो, उनी घरका कुरा, माइतका कुरा अनि विहे अघिका कुराहरु सुनाउँथिन।
घण्टौ म त्यही बिताउँथे। उनी घरका कामकाज सकाउँथिन। उनी काम गर्दा टिभी हेर्थे। अनि उनी फर्केपछि सोफाको एक छेउमा उनी बस्थिन अनि अर्को छेउमा म गफ सुन्नमा मस्त हुन्थे।
आन्टी र म यति नजिकिएका थियौ कि उनले आफ्ना कलेजका कर्तुतहरु सुनाउन थालेकी थिइन। केटाहरुले जिस्काको, चिठी पठाको आदि आदी। उनका साथीहरुका अफेयर, अनि लुसुक्क केटा भेट्न गएको अनि गालामा किस गरेर फर्केको आदी घटना सुनाउँदा अङ्कललाई चाही नसुनाउनी, तिम्रो र मेरो बिचको कुरा हो भन्न छुटाउँथिनन्।
त्यहाँ बाथरुम जाँदा मलाई सधै एउटा कुरा भइदिओस् जस्तो लाग्थ्यो। उनी बिहान नुहाएकी छिन् भने बाथरुममा धुन राखेका लुगामा उनको बासना भएको ब्रा र पेन्टी हुने गर्थ्यो। ओहो, त्यसको बासनाले म बाथुरुम भित्रै हल्लाउन थाल्थे। ब्राको बासना लिदै पेन्टीले लाडो समातेर हल्लाउँदा उनीसंग मडारिएको जस्तो लाग्थ्यो। बासनाको शक्ति।
केही बेर हल्लाएपछि झरेको फुसी त्यही पेन्टीले नै पुछ्दिन्थे। एक खालको यौन सन्तुष्टी मिल्थ्यो त्यस्तो गर्दा। थाहा पाएनी पाउन । तर उनी लुगा धुँदा सिधै धारा खोलेर भिजाइदिन्थिन। धुन राखेको लुगा कसले पो हेरिरहन्छ।
उनी आज स्पेशल आउटफिटमा थिइन। आज पातलो म्याक्सी लगाएकी थिइन। अनि सोफामा बस्दा उनी घरी खुट्टा मार्थिन त घरी खुट्टा पसार्थिन। म्याक्सी माथी सर्दा उनका खुट्टा देखिन्थे, सेता, सर्लक्क परेका, १८ वर्षे तरुणीका जस्ता, घुँडासम्म नग्न। थोरै पनि यस्तो देख्दा उनको भित्री अंग देख्ने बढो इच्छा जागेर आउँथ्यो। बस्दा बस्दा त्यही कल्पनामा ठनक्क हुन्थ्यो।
उनलाई पालिस लगाउने बढो शोख थियो। थरीथरीको रंग उनी दिनदिनै फेरिरहन्थिन। घर बस्दा बस्दा बोर लागेर पनि होला, अरु के गरेेर बस्नु दिनभरी। पालिस, मेकअप। अनि उनी बेलुका चाहीँ सधै बाहिर निस्कन्थिन। कहिले किनमेल त कहिले साथीहरु भेट्न। उनका केटी साथीहरु।
सोफामा उनी बस्थिन खुट्टा दोबारेर, म भुइँको गलैचामा उनको हात समातेर बढो मजाले पालिस लगाइरहन्थ। उनको नजिक पर्दा उनको शरीरबाट निस्केको तातो बासनाले त्यो पालिस लगाउने समय म सकेसम्म लम्ब्याइरहन्थे। बिस्तारै सुस्त गतिमा। अनि कहिले त जथाभावी लगाउँदै, स्प्रिटले सफा गर्दै समय लगाउँथे।
म उनको हत्केलाको प्रशंसा गर्न कहिल्यै बिर्सन्नथे। अनि उनका लामा लामा औलाहरुको। चट्ट पालिस लगाएपछि त झन् उनको औला नै चुसु चुसु लाग्ने। कलिला, सुकोमल, सुन्दर।
आज उनलाइ खै के पारो चलेको थियो। ढाड दुखेको छ मालिस गरिदिन्छौ पो भनिन। यस्तो अवसर म कहाँ छोड्छु र। मैले हुन्छ भने।
‘ल उता बेडरुममा सजिलो हुन्छ। खै हिजो देखि हो, निहुरिएर काम गरेर पो हो कि, यस्तो त कहिल्यै भएको थिएन।’
उनी सोफा बाट उठ्दै बेडरुम तिर लाग्दा दुखाइको कारण बताइन।
मलाइ कारण संग कुनै मतलब थिइन। जसरी सुकै दुखोस, आज उनका केही नदेखिएका अंगहरु देख्न पाइने भएकोमा मन ढक्क फुलेको थियो। डर अनि एक्साइटमेन्टले।
बेडरुममा पुगेपछि उनले मलाई लोसको एउटा बट्टा दिएर खाटमा गइन।
‘खै उता हेर त एक छिन।’
यो नाटक गर्नुपर्ने के जरुरी थियो मैले बुझिन। त्यै नि म पछाडी फेर्के।
‘ल भयो। कम्मरमा अलिक प्रेस गरेर गर है।’
‘हुन्छ।’, उनी म्याक्सी खोलेर सर्वाङ्ग नाङ्गो खाटमा घोप्टो परेकी थिइन। उनको ढाड यति सेक्सी थियो कि ओहो, कसरी बयान गर्नु। उनी उनको चाकको पुठोको आकारले नै आकर्षित गर्थ्यो। मोटा साँप्रा टिपिक्का टाँसेकी थिइन। उनी माथी नै घोप्टिन मन हुन्थ्यो।
बट्टा बाट अलि कति लोसन निकालेर उनको ढाडमा दल्न थाले। सुकोमल उनको ढाडमा स्पर्श गर्दा नै लाडो ठन्किएर रन्किसकेको थियो। उनको साइडमा बसेर ढासमा मालिस गरिदिन थाले। ५, १० मिनेट पछि उनको कम्मर तिर सरे। लोसन थप्दै कम्मरमा अलिक प्रेस गर्दै मालिस गर्न थाले।
‘तिमीलाई अप्ठ्यारो त भएको छैन नि।’
मालिस गर्न थालेपछि उनी पहिलो पटक बोलिन।
‘छैन। बरु मैले मालिस गरेको त भ’को छ नि।’
‘गज्जब, गर्दै जाउ कम्मरमा पुग्यो अहिले तल तल सर्दै जाउँ।’
के यो खुला इन्भिटेसन हो? जे होस्, मेरो आनन्दले सिमा नाघिसकेको थियो। उनलाई लोसन दल्दा दल्दै गल्दै गएको थिए।
उनको पुठोमा हात लगाए। लोसन बिना अनि त्यतिकै मुसार्न थाले। हत्केलाले च्याप्प समातेर तान्न, धकेल्न थाले। उनको पुठोको मसल्स थलथल गर्थ्यो।
‘लोसन लगाएर गर न सजिलो हुन्छ।’, उनले चाल पाएकी रहेछिन।
‘किन यसरी मजा आएन र आन्टी?’
‘तिमीलाई सजिलो हुन्छ भनेर हो, गर गर।’
उनको साँप्रामाथी बसे। उनले केही बोलिनन्। अनि उनको पुठो चलाउन थाले। मालिस गर्दै जाँदा उनको दुइ पुठो च्यातेर हेरे, चाक प्वाल सफा चट, साला यो केटीको शरीरमा रौं नै छैन क्या हो!
अनि बिस्तारै खुट्टा फट्याउँदै उनको पुतिको दर्शन गरे। रातो, सेभ गरेर राखेको सफा।
मालिस गर्दा गर्दै झुक्किएर पुगेको जस्तो हुने गरी उनको पुति छुन पुगे, मज्जाले नै। उनी सिरिङ्ग भइन।
‘जथाभावी हात नलगाउन त!’
‘यता भइसक्यो, खै अब माथी फर्किनु।’
उनी केही नभनी उत्तानो परिन।
आहा! यो हो नि त स्तन भनेका। ठूला तर टाइट। साच्चै जवानी केटीको जस्तो, बच्चाकी आमा हुन भन्ने भान नहुने स्तन। अनि ती पुक्क उठेका पुति। देख्नासाथ झम्टिन मन लाग्ने।
‘आन्टी एउटा कुरा भनम।’
‘तपाइको बु्ब्स देख्दा त तपाइ भर्खर १८ वर्षको केटी जस्तो पो लाग्ने रहेछ।’
‘हगी। मेन्टन गरेको नहोस् पनि किन।’
‘के को छुम मात्र, मालिस गर न लोसन ले।’
अनि सुरु भएको स्तनको मालिस। मुन्टा तान्दै, मासु लुछ्दै, मन्द गतिमा, अनि अलिक बल प्रयोग गरेर।
हुँदै उनको पुति सम्म पुग्यो। तब औलाले उनको टिसी चलाए। उनी उत्तेजित भइरहिन।
अहँ अब खप्न सकिन। झटपटक पाइन्ट खोलेर घुसार्दिहाले।
आनन्दले बन्द भएका उनका आँखा खुले।
‘के गरेको? छोड छोड।’
‘के को छोड छोड आन्टी। यति सम्म गरेपछि त चाहियो नि अब।’
‘अलिकत सरम मान त, आन्टी हो म तिम्रो।’
‘अब के को आन्टी नि, यतिको भइसकेपछि त।’
‘अङ्कलले थाहा पाए के होला?’
‘हामी बिचको गोप्य कुरा हो आन्टी, अनि तपाइले भन्नु हुन्न, म आन्टीलाई चिकेको भनेर भन्दिन कसरी थाहा हुन्छ?’
‘छ्या यस्तो कुरा नगर त।’, जोडले पेल्दा उनको अनुहार कामुक हुँदै गएको थियो
‘कस्तो कुरा ?चिकेको कुरा?’
‘अँ…..आ…..अँ नगर….आ…..यस्तो कुरा…’ उनी खाटमा तल र माथी मच्चिन थालिन। उनको नग्न शरीरमा म मच्चिन थाले।
‘भन्छु आन्टी, यी…. यसरी तपाइको पुतिमा चिक्दै छु….गर्दा हुने भन्न किन नहुने….’
‘सुन्दा राम्रो लाग्दैन….आ…. फास्ट…अलिक मज्जाले गर…..आ…हो..हो यसरी….आ..’
‘प्वाट प्वाट …. क्वाँच क्वाँच…’
‘सुन्दा के फरक पर्छ र। तपाइको धुन राखेको ब्रा सुँघेर पेन्टीमा फुसी झान्ने मान्छे हुँ, बोल्दा त के जान्छ र?’
‘छ्या…..कहिले……आ …. आ…..’ आन्टी झन् झन् आनन्दको शिखरमा थिइन।
‘भेटेको बेला…’, उनको दुवै हात समातेर उनीमाथी सबै भारको साथ ठोक्न थाले।
‘त्यस्तो नि गर्छन् त आन्टीको लुगामा?’
‘गर्न त के के मन थियो नि आन्टी, लुगा बाहिरै बाट लाडो कोच्न मन थियो तपाइको यो …..’ मज्जाले ठेल्दै, .’..पुतिमा’
जारी रह्यो झण्डै २५ मिनेट अनि आन्टीको मुखभरी फुसी झारीदिए।
आन्टीले लुगा लगाइन अनि खाटबाट तल ओर्लिन।
उनको पुठोमा प्याट्ट पार्दा उनले आखा तरिन।
‘के आँखा तर्नु भ’को। अब त दिन दिने चिक्नु पर्छ, तपाइ त मेरो माल हुनुभयो अब।’
‘छि छि, हेर यो केटाको मति!’, उनले सानो हुँदै गएको लाडोमा प्याट्ट पिटेर जिस्किइन।
केटीलाई गोठमा // 18+// Nepali Sex Stories